Ku -tamashleynta Xarunta Madaxtooyada ee Kabul oo ay la socdaan Dagaalyahannada Daalibaan sida hoggaamiyeyaal
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Afgaanistaan » Ku -tamashleynta Xarunta Madaxtooyada ee Kabul oo ay la socdaan Dagaalyahannada Daalibaan sida hoggaamiyeyaal
Wararka Afgaanistaan • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Hogaamiyaha Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha cusub ee Afghanistan.
Dagaalyahannada Daalibaan ayaa siinaya fursado sawirro weriyayaasha Al Jazeera oo ka socda xafiiska madaxtooyada ee Kabul.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ka tagay Afghanistan iyadoo Taliban ay ku dhowdahay Kabul, sida uu sheegay wada -xaajoodka ugu sarreeya ee nabadda ee Abdullah Abdullah.
Telefishinka Aljazeera ayaa baahiyay warar gaar ah oo ka soo baxay qasriga dhexdiisa taas oo muujineysay Daalibaan Dahab oo fadhiya xafiiska madaxtooyada ee Kabul
The Safaaradda Mareykanka ee Kabul wuxuu barayaa dhowr iyo toban qof oo Mareykan ah wararka ku saabsan gegida diyaaradaha ee Kabul. Talada ku socota dadka Mareykanka ah ee ku xayiran Afghhanistan inay gabbaad ka dhigtaan
Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa lagu dhawaaqi doonaa Taliban
Nidaamka Talibanka ayaa qorsheynaya inuu Afgaanistaan ​​u beddelo Imaaradda Islaamiga ee Afganistan.
Waqtigan xaadirka ah Mareykanku wuxuu si toos ah Afghanistan ugu dirayaa 6000 oo askari, kuwani waa 1000 dheeraad ah oo horeyba u ahaa 5000.
Saxafiyiin u tebinaya shabakadda wararka ee fadhigeedu yahay Qadar Al Jazeera ayaa maanta lagu casuumay inay booqdaan Xarunta Madaxtooyada ee Kabul, Afghanistan. Dagaalyahanada Daalibaan ayaa isku soo sawiray xafiiska madaxtooyada iyagoo wata qoryaha darandooriga u dhaca.
Waxaad moodaa inay jirto argagax iyo cabsi, laakiin wax dhiig ah laguma soo sheegin maanta Caasimada CIty ee Kabul iyadoo dagaalyahanada Daalibaan ay ku qabsadeen magaalada xawaare aad u sareeya.
It bilaabmay subaxnimadii Axadda, Ogosto 15, waxayna ku dhamaatay habeenkii. Afgaanistaan ​​waxay ku soo noqotay gacanta talibanka 20 sano ka dib, tiriliyanna waxay ku bixiyaan sidii ay uga fogaan lahaayeen.
Goor dambe oo Axaddii ah, ayaa la shaaciyey in Ghani uu dalka ka baxay isaga iyo dhowr xubnood oo ka tirsan golihiisa wasiirrada.
“Madaxweynihii hore ee Afghanistan wuxuu ka tagay Afgaanistaan. Wuxuu qaranka uga tagay xaaladdan [taas darteed] Ilaahay ayaa la xisaabtami doona, ”Abdullah Abdullah, oo ah guddoomiyaha Golaha Sare ee Dib -u -heshiisiinta Qaranka, ayaa ku sheegay muuqaal uu soo dhigay bartiisa Facebook.
Burburka xukuumadda reer Galbeedka ee Kabul ayaa imaanaysa kadib markii Talibanka blitzkrieg oo bilaabmay 6-dii Ogosto oo horseeday in la qabsado in ka badan labaatan gobol oo Afghanistan ah subaxnimadii Axadda.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ka qaxay dalka Afghanistan isagoo ku sii jeeday dalka Tajikistan. Arrintan ayaa muwaadiniinta Afgaanistaan ​​u arkaan mid aan wadaninimo.
Wadamada reer galbeedka oo niyad jabsan ayaa u xusul duubaya inay ka daad gureeyaan shaqaalaha safaaradda. Raiisel wasaaraha UK Boris Johnson ayaa ku boorinaya dowladaha inaysan u aqoonsan Dowlada Taalibaan Afghanistan.
Quus: Dadka ku sugan gegida diyaaradaha oo isku dayaya inay ka baxsadaan Taalibaan oo qabsatay Afgaanistaan
Afghanistan waxaa jooga ku dhawaad ​​1500 oo qof oo reer Nepal ah. Wasaaradda arrimaha dibedda ee Nepal ayaa sheegtay in Nepal ay isku dayayso inay diyaariso qorshayaal lagu caawinayo muwaadiniinteeda si ay uga baxaan Afghanistan.
Faransiiska ayaa safaaradiisii ​​u raray gobolka garoonka diyaaradaha ee Kabul, halka wararka Mareykanka ay sheegayaan in gegida dayaaradu gubatay oo la xiray. Diblomaasiyiinta Midowga Yurub ayaa loo raray goobo aan la sheegin.
BREAKING: Fowdo ayaa ka jirta Madaarka Kabul ee Afgaanistaan ​​iyadoo boqolaal ay isku dayayaan inay dalka ka cararaan sida ugu dhakhsaha badan. pic.twitter.com/jwi8bjbFs
- Macluumaadka Gudaha (@TheInsiderPaper) August 15, 2021
Fowdo ka dhacday Kabul AIrport
Diblomaasiyiinta u ordaya inay baxsadaan. Waxaa laga arkay Safaaradda Pakistan ee Kabul, Afghanistan
Waaxda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka ayaa baahisay wareysigan uu la yeeshay Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Anthony Blinken oo uu siiyay ABC News
Antony J. Blinken, Xoghayaha Gobolka
SU'AAL: Oo hadda ah Xoghayaha Arrimaha Dibadda Tony Blinken. Xoghaye Blinken, waad ku mahadsan tahay inaad nagu soo biirtay.
XOGHAYAHA BLINKEN: Waad ku mahadsan tahay inaad i heshay.
SU’AAL: Aan ku bilowno xaaladda safaaraddeenna Kabul. Miyaad ku kalsoon tahay amniga shaqaalaha Mareykanka ee safaaradda xitaa iyadoo Taliban ay ku hareereysan tahay Kabul?
XOGHAYAHA BLINKEN: Taasi waa shaqo aniga ii gaar ah, John. Waxaan ka shaqeyneynaa sidii aan u hubin lahayn in shaqaalaheennu ay yihiin kuwo ammaan ah oo ammaan ah. Waxaan u raraynaa ragga iyo dumarka safaaraddeena meel ku taal garoonka diyaaradaha. Waa sababta uu madaxweynuhu u soo diray tiro ciidamo ah si ay u hubiyaan, maadaama aan sii wadno inaan hoos u dhigno joogitaankeenna diblomaasiyadeed, waxaan u samaynaa si ammaan ah oo habsami leh isla mar ahaantaana waxaan sii wadnaa joogitaanka diblomaasiyadeed ee muhiimka ah ee Kabul.
SU'AAL: Haddaba aan iska hubiyo inaan si sax ah ku maqlay. Waxaad shaqaale u raraysaa safaaradda - miyay taasi ka dhigan tahay inaad xireyso xarunta safaaradda Mareykanka ee Kabul, dhismahaas waa laga tegi doonaa?
XOGHAYAHA BLINKEN: Hadda, qorshaha aan hirgelinayno ayaa ah in shaqaalaha laga raro xarunta safaaradda ee Kabul loona raro meel garoonka diyaaradaha ah si loo hubiyo inay si ammaan ah oo ammaan ah u shaqayn karaan, sidoo kale in la sii wado in dadku ka baxaan Afgaanistaan waxaan samaynay ilaa Abriil - dabayaaqadii Abriil, Abriil 28 -keedii. Waxaan ku jirnay amar bixitaan tan iyo markaas. Waxaan u samaynay si ula kac ah. Waan hagaajinnay iyadoo ku xiran xaqiiqooyinka dhulka yaal. Waa sababta aan gacanta ugu haynay xoogag uu Madaxweynuhu u soo diray si loo hubiyo inaan tan u samayn karno si ammaan ah oo nidaamsan. Laakiin xarunta lafteeda - dadkeennu halkaas ayay ka tagayaan oo waxay u guurayaan garoonka diyaaradaha.
SU'AAL: Dukumiinti gudaha ah oo u baxay shaqaalaha safaaradda Jimcihii ayaa shaqaalaha Mareykanka ee safaaradda ku amray inay yareeyaan tirada macluumaadka xasaasiga ah ee ku jira hantida, waxaana sidoo kale lagu yiri, “Fadlan… waxyaabaha si khaldan loogu adeegsan karo dadaallada dacaayadda. ” Markaa si cad walaaca halkan ka jira ayaa ah in Taalibaan - tanina sidoo kale, waxaan u malaynayaa, sababta aad dadka ugu rarayso gegida dayuuradaha - in Taalibaanku buux dhaafi lahaayeen oo la wareegi lahaayeen dhismaha safaaradda.
XOGHAYAHA BLINKEN: Kani waa habraac hawlgal oo caadi ah xaalad kasta oo tan oo kale ah. Waxaa jira qorsheyaal haddii aan ka tagno xayndaabka safaaradda, oo aan dadkeenna u rarayno meel kale, si aan u qaadno dhammaan tallaabooyinkaas, kuwa aad hadda liis garaysay. Markaa tani waa sida saxda ah ee aan ku samayn lahayn mid ka mid ah xaaladahaas, mar labaadna, tan waxaa loo qabtaa si ula kac ah, waxaa loo qabtaa si habsami leh, waxaana lagu sameeyaa ciidamada Mareykanka ee halkaas jooga si loo hubiyo inaan yeeli karno hab ammaan ah.
SU'AAL: Si xushmad leh, wax badan oo ku saabsan waxa aan aragno ayaa u muuqda kuwo nidaamsan ama nidaam hawlgal caadi ah. Bishii la soo dhaafay, Madaxweyne Biden wuxuu sheegay inaysan jirin wax duruuf ah - taasina ay isaga tahay - taasi waa ereyadiisii ​​- iyadoo aysan jirin duruufo ay ahaayeen shaqaale Mareykan ah, shaqaalaha safaaradda ayaa laga duuliyey Kabul iyadoo dib loogu celinayo muuqaalkii aan ku aragnay Saigon 1975. Markaa miyaanay ahayn waxa aan hadda aragno? Waxaan ula jeedaa, xitaa sawirradu waa kuwo kicinaya wixii ka dhacay Vietnam.
XOGHAYAHA BLINKEN: Aan tallaabo dib u laabanno. Tani si cad maahan Saigon. Xaqiiqda arrintu waa tan: Waxaan aadnay Afghanistan 20 sano ka hor annagoo hal maanka ku hayna, taasina waxay ahayd inaan wax ka qabanno dadkii na soo weeraray 9/11. Hawshaasina waa lagu guulaystay. Waxaan horkeennay bin Laden maxkamad toban sano ka hor; al-Qaida, kooxda na soo weerartay, aad bay u yaraatay. Awooddeeda ay mar kale nooga soo weerari karto Afgaanistaan ​​ayaa ahayd-hadda ma jirto, waxaanan hubin doonnaa inaan ku sii hayno gobolka awoodda, ciidamada lagama maarmaanka u ah inay arkaan dib-u-soo-bax kasta oo hanjabaad argagixiso iyo si aad wax uga qabato. Markaa marka la eego wixii aan ku talagalnay inaan ka sameyno Afgaanistaan, waan sameynay.
Oo hadda, intii oo dhan, Madaxweynuhu wuxuu lahaa go’aan adag oo uu qaadan karo, go’aankaasina wuxuu ahaa wixii laga yeeli lahaa ciidammadii hadhay ee aan dhaxalnay markii aan xafiiska imaannay ee joogay Afgaanistaan, iyadoo waqti cayiman uu maamulkii hore u dejiyey si loo helo bixi doona 1 -da May. Go’aankaas ayuu qaatay. Waxaan joognay Afgaanistaan ​​muddo 20 sano ah - $ 1 tiriliyan, 2,300 oo qof oo Mareykan ah ayaa lumay - mar labaadna, mahadsanid, markii aan ku guuleysannay inaan sameyno wixii aan damacnay inaan sameyno marka hore. Madaxweynuhu wuxuu go'aamiyay inay tahay waqtigii la joojin lahaa dagaalkan Mareykanka, oo laga bixi lahaa dhexda dagaalka sokeeye ee Afgaanistaan, iyo inuu hubiyo inaan eegno danahayaga adduunka oo dhan, adduunka oo dhan, iyo in naloo dhisay inaan danahaas hormarino. Taasi waa waxa aan sameyneyno.
SU’AAL: Laakiin Madaxweynaha waxaa sidoo kale kula taliyay lataliyayaashiisa sare ee milatariga, sida aan fahansanahay, inuu ka tago xoogaa joogitaan milateri dalka oo ay joogaan ilaa 3-4,000 oo ciidamo Mareykan ah. Miyuu jiraa wax laga xumaado hadda oo uusan qaadan taladaas, talooyinka lataliyayaashiisa milatari ee ugu sarreeya, si uu uga tago xoogaa joogitaan milateri Afghanistan?
XOGHAYAHA BLINKEN: Waa kan doorashada uu Madaxweynuhu wajahay. Mar labaad, xusuusnow in waqti cayiman ay dejiyeen maamulkii hore ee 1 -da May si ay ciidamadeenna haray uga saaraan Afghanistan. Iyo fikradda ah inaan joogtayn karno xaaladda hadda jirta annagoo ciidamadeenna halkaas ku haysanna waxaan u malaynayaa inay khalad tahay, maxaa yeelay waa tan waxa dhici lahaa haddii Madaxweynuhu go'aansado inuu ciidamadaas sii joogo: Muddadii laga soo bilaabo markii heshiiska la gaaray illaa 1 -da May, Taliban waxay joojisay weerarada ciidamadeena, waxay joojisay weerarada ciidamada NATO. Waxay kaloo joojisay weerarkan weyn ee aan hadda u aragno inaan isku dayno inaan ku qabsanno dalka, si aan u aadno caasimadaha gobollada, oo toddobaadyadii la soo dhaafay ay ku guulaysatay inay qabato.
Kaalay May 2 -deeda, haddii Madaxweynuhu go'aansado inuu joogo, gacmo -gashiga oo dhami wuu joogsan lahaa. Waxaan ku soo laaban lahayn dagaalka Taliban. Waxay weerari lahaayeen ciidamadeenna. Waxaan lahaan lahayn 2,500 oo ciidan ah oo dalka ku haray oo leh awood cirka. Uma maleynayo inay taasi ku filnaan lahayd wax ka qabashada waxa aan aragno, taas oo ah weerar ka dhan ah waddanka oo dhan, waxaanan ku jiri lahaa barnaamijkan tusaale ahaan malaha inaan sharraxo sababta aan u dirnay tobanaan kun xoogaggii dib ugu noqday Afgaanistaan ​​si ay u sii wadaan dagaal uu waddanku rumaysan yahay in loo baahan yahay in la soo afjaro 20 sano ka dib, $ 1 tiriliyan, iyo 2,300 oo naf ah ayaa luntay, iyo guusha lagu gaarayo yoolalkii aan dejinnay markii aan galnay meesha ugu horreysa.
SU'AAL: Aan ku ciyaaro wax uu Madaxweyne Biden yiri horraantii sannadkan markii wax laga weydiiyay rajada laga qabo waxa, asal ahaan, aan hadda aragno, qabsashada Taliban ee Afgaanistaan:
"Waxay u badan tahay inay jiri doonaan Taliban wax walba buuxin doona oo lahaanshaha dalka oo dhan waa wax aan macquul ahayn."
Markaa ma isaga ayaa sirdoonkiisa khalday? Miyuusan maqlin iyaga? Muxuu taas ugu khaldanaa?
XOGHAYAHA BLINKEN: Laba shay. Wuxuu yiri oo waxaan dhahnay dhammaanba in Taalibaan ay ku jirto meel awood leh. Markii aan xafiiska imaanay, Daalibaan waxay joogtay meeshii ugu adkeyd mar walba tan iyo 2001, tan iyo markii ay ugu dambeysay awoodda Afghanistan ka hor 9/11, waxayna awood u yeelatay inay kor u qaado awoodeeda labadii sano ee la soo dhaafay hab muhiim ah. Markaa taasi waxay ahayd wax aan aragnay oo aan hore u aragnay.
Markaan idhaahdo, Ciidamada Amniga Afgaanistaan ​​- Xoogagga Amniga Afgaanistaan ​​ee aan maal -gashannay, bulshada caalamku waxay maal -gelisay muddo 20 sano ah - dhisidda ciidan 300,000 ah, qalabeynteeda, iyagoo garab taagan ciidan cirka ah oo ay haysteen in Taliban ma lahayn - xooggaas wuxuu caddeeyay inuusan awood u lahayn difaaca dalka. Taasina waxay u dhacday si ka dhakhso badan sidii aan filaynay.
SU’AAL: Markaa maxay tan oo dhan uga dhigan tahay sumcadda Ameerika ee adduunka iyo waxa Madaxweyne Biden si xoog leh uga hadlay, baahida loo qabo in lagu dagaallamo magaca dimoqraadiyadda iyo qiyamka dimoqraadiyadda, si aan u aragno annaga oo baxaya iyo koox xagjir ah oo soo galaysa oo awoodda la wareegaysa taasi oo doonaysa inay xidho xaqa ay gabdhuhu u leeyihiin inay iskuulada tagaan, taasi oo fulinaysa askarta isa soo dhiibaya, taasi waa wax kasta oo aan ahayn wakiil ka ah qiyamkaas dimuqraadiga ah ee Madaxweyne Biden sheegay inay tahay in Maraykanku u istaago?
XOGHAYAHA BLINKEN: Marka waxaan u malaynayaa inay jiraan laba shay oo muhiim ah halkan. Marka hore, waxaan ku soo noqonayaa soo jeedintan ah in marka la eego wixii aan ku talagalnay inaan ka sameyno Afgaanistaan ​​- sababta aan markii horeba u joognay, si aan ula macaamilno kuwii nagu soo weeraray 9/11 - waan ku guuleysanay inaan sidaas yeelno. Farriintaasna waxaan u malaynayaa inay aad u dhawaaqdo.
Waxa kale oo run ah inaysan jirin wax ay tartamayaasha istiraatiijiyadeed ee adduunka oo dhan jeclaan lahaayeen wax ka badan inay arkaan annaga oo Afgaanistaan ​​ku dhibban shan, toban, ama labaatan sano oo kale. Taasi danta qaranka kuma jirto.
Midda kale waa tan: Markaan tixgelinno haweenka iyo gabdhaha, dhammaan kuwa noloshooda hore u maray, tani waa mid kacsan. Waa walax adag. Waxaan la kulmay tiro ka mid ah hogaamiyayaashan haween ah oo wax badan u qabtay dalkooda iyo haweenka iyo gabdhaha ku nool Afgaanistaan ​​20 -kii sano ee la soo dhaafay, oo ay ku jirto dhowaan Abriil markii aan joogay Kabul. Waxaanan u malaynayaa inay hadda ku habboon tahay beesha caalamka inay sameeyaan wax kasta oo aan awoodno annagoo adeegsanayna aalad kasta oo aan haysanno - dhaqaale, diblomaasiyadeed, siyaasadeed - si aan isugu dayno inaan sii wadno guulaha ay gaareen.
Ugu dambayntiina waxay ku jirtaa danta gaarka ah ee Daalibaan-waa inay go'aan ka gaaraan, laakiin waxay ku jirtaa danahooda gaarka ah haddii ay si dhab ah u raadsadaan aqbalaad, aqoonsi caalami ah; haddii ay rabaan taageero, haddii ay rabaan in cunaqabataynta laga qaado - waxaas oo dhami waxay u baahan doonaan inay ilaaliyaan xuquuqda aasaasiga ah, xuquuqda aasaasiga ah. Haddii aysan yeelin iyo haddii ay ku jiraan awood awood oo aysan sidaas yeelin, markaa waxaan u malaynayaa in Afgaanistaan ​​ay noqon doonto dowlad diimeed.
SU’AAL: Xoghayaha Arrimaha Dibadda Tony Blinken, aad baad ugu mahadsan tahay inaad saaka nagu soo biirto.